Home Wararka Golaha Aqalka Sare baarlamaanka JFS oo ka horyimid Goaankii Madaxweynaha Mareykanka ee...
Golaha Aqalka Sare baarlamaanka JFS oo ka horyimid Goaankii Madaxweynaha Mareykanka ee Bariga Dhexe
Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa soo bandhigay qorshihiisii mudada dheer la sugayey ee nabadaynta Bariga Dhexe kaas oo dhigaya in magaalada Quddus noqoto caasimadda Israel taas oo aan qeybsameynin.
Warkiisa waxaa uu isugu jiray gooddi iyo digid inay tahay tani fursaddii ugu dambeysay ee ay Helaan reer falastiin.
Trump oo uu dhinac taagan yahay BB Natenyahu ayaa waxaa uu sheegay in dhulka ay boobtay yuhuudda ee Daanta galbeed uu yahay dhul ka mid ah Isra’iil.
Madaxweynaha Falastiiniyiinta, Maxmuud Cabbaas, ayaa aad u diiday qorshaas waxaanu ku tilmaanay “shirqool”. Isagoo careysan ayuu yiri Madaxweyne Cabaas “Trump iyo Netanyahu waxa u sheegayaa in Quddus aanay iib ahayn, xuquuqdadayadoo dhami iib maaha gorgortanna kama galayno. Qorshahaaga iyo shirqoolkaaguna meel mari maayo” .
Hasa yeeshee Xildhibaanada Golaha Aqalka Sare ee dalka oo xilkooda Iyo mas’uuliyadooda gudanayey ayaa cod gacan taag ku ansiyay qaraarka ka dhanka ahaa heshiiskii Qarniga, isla markaana meel uga dhacaya Madaxbanaanida Falastiin.
Waxaasa wax laga xumaada ah in Xukuumadda Somalia aysan wali wax ka dhihin arintaas oo ahayd inay ka qaadato mowqif cad una yeerto Safiirka Mareykanka si ay ashtako ugu gudbiso.
Waxaa kale isagana aamusan gobalaha Shacbiga oo ay ahayd inay ku hadlaan dareenka dadka Somaliyeed oo ay ogyihiin inay waajib tahay in loo muujiyo walaalaha Falastiin inay xaqoodaa iyo aaya ka talinta dhulkooda helaan.